द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 6, 2018 | व्यावसायिक विकास
हामीसँग सबैसँग क्षमताहरू, व्यक्तिगत गुणहरू र प्राकृतिक छन्! तर हामी को वास्तव मा उनलाई कसलाई शोषण गर्छन? के हामी यसको बारे चिन्तित छौं? यसलाई कसरी राम्रो प्रयोग गर्न सफल भयो? जान्नुहोस् कि कसरी आफ्नो कौशल को दोहन र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न समय बचत।
तपाईं आफ्नो बचपन पछि समय सिक्दै हुनुहुन्छ; जान्न कसरी विकसित गर्ने, कसरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा जान्छ, तर यो के हो कि आमा प्रकृतिले तपाईंलाई प्रस्ताव गरेको छ? गहिरो भित्र के छ?
उदाहरणका लागि कल्पना गर्नुहोस्: तपाईं आफ्नो भविष्यको व्यावसायिक परियोजनाको लागि बाटो लिन चाहानुहुन्छ, यस अवस्थामा, तपाईलाई प्रयासहरू पुन: प्रयास गर्नुपर्दछ र सायद अन्त तपाईंलाई उपयुक्त छैन। र यदि तपाईले तपाइँको प्राकृतिक प्रतिभा खोज्नुभयो भने? यसले तपाईंलाई एक फरक मार्ग लिन सक्ने छ, सफलताको! नतिजाको रूपमा तपाईंले दोस्रो लेन लिन कम समय गुमाउनु भएको छ।
2 मिनेटको उत्प्रेरित भिडियो! यसले तपाइँका गुणहरू विकास गर्न प्रमुख मील का पत्थर दिन्छ।
यो भिडीयोमा तपाईले सुझावहरू र सल्लाह पाउनुहुनेछ जुन तपाईले समय बचत गर्ने क्रममा तपाईका कुकुरहरूलाई शोषण गर्ने अनुमति दिनेछ ... र सबैले, केवल5बिन्दुहरूमा:
1) तपाईंको क्षमताहरू तपाईंसँग छ, तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
2) मूल्य : यदि तपाईंले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुभएन भने, कसैले तपाईंको लागि गर्दैन।
3) को क्षेत्रउत्कृष्टता एक नौकरी बनाउन को लागि आफ्नो कौशल को विकास!
4) फोकस गर्नुहोस् : एकाग्रता तपाईंको कौशल बढावा देगा।
5) आफ्नै भन्दा भन्दा राम्रो : यो अविश्वसनीय छ, आफैलाई ठीक छ, हामी सधैं राम्रो देखि जान्दछौं।
तपाईंको वरपरका गुणहरू बढ्न र साझा गर्न तयार हुनुहुन्छ?
रिड तपाईंको कमजोरीहरू कसरी बलियो बनाउने?
हाम्रा क्षमताहरू किन बुझ्न सक्दैनन्? मई 12th, 2018Tranquillus
अघिल्लोएक्शन सिग्नलको रूपमा एक जना डरको डरबाट टाढा
निम्नएक्सेल युक्तिहरू तपाईंको उत्पादकता डपिंग पहिलो भाग